ကျွန်တော်တို့အားလုံးချမ်းသာချင်ကြတယ်။ Shwemomစာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးလည်း ချမ်းသာချင်မှာအသေအချာပါပဲ၊ အထူးသဖြင့် ငယ်စဉ် ၂၀ နဲ့ ၃၀ကြားလောက်မှာ ချမ်းသာရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့ ချမ်းသာဖို့ဆိုတာလည်း ဒီနေ့လုပ် ဒီနေ့ဖြစ်တဲ့အရာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ငယ်တုန်းမှာ ကြိုးစားတာပိုကောင်းပါတယ်။ အသက် ၂၀ကနေ ၃၀ ကြားမှာ ချမ်းသာချင်ရင်တော့ အောက်ပါအချက်လေးတွေကို လိုက်နာသင့်ပါတယ် (၁) […]
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ပျံ့နှံ့နေတဲ့ ခင်ပွန်းသည် မလေးရှားမှာ အလုပ်လုပ်နေတုန်း ဖောက်ပြန်နေတဲ့ ဇနီး
အွန်လိုင်းပေါ်မှ ပျံ့နှံ့နေတဲ့ ခင်ပွန်းက မလေးရှားမှာ အလုပ်လုပ်နေတုန်း ဖောက်ပြန်တဲ့ ဇနီး လူမှုကွန်ယက်ပေါ် ပျံ့နှံ့လာမှ ဖောက်ပြန်တာ သိရသော ဇနီးအား တလင်တမယားဥပဒေဖြင့် အမှုဖွင့်။ ။ ရန်​ကုန်​တိုင်း​ဒေသကြီး မြောက်​ပိုင်းခရိုင်​ တိုက်ကြီးမြို့နယ်​၊ ဥက္ကံမြို့၊ အ​နော်​ရထာရပ်​ကွက်​၊မြသီတာလမ်း၌ နေထိုင်သူ ကိုမျိုးမင်းဝင်းတွင် ၂၀၁၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ […]
မတူညီမှုများ…. တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့နေရာကို တပ်မကြီးတွေလွှတ်လိုက်ပြီဆိုတော့၊facebook ပရိတ်သတ်ကြီးက အပြုတ်ဆော်ပစ်၊ချကြ ဆိုပြီး လက်ခုပ်လက်ဝါးတီးအားပေးတယ်။ ဓမ္မာရုံထဲမှာ ရှေ့တန်းထွက်တပ်ရင်းက ရဲမေတွေကကိုယ့်လင်သားတွေ အန္တရာယ်ကင်းပါစေဆိုပြီးပရိတ်သံကို အကျယ်ဆုံးရွတ်တယ်။ တောရွာလေးတစ်ခုမှာနေတဲ့ အမေအိုတစ်ယောက်ကရှေ့တန်းထွက်သားတော်မောင် ဘေးကင်းပါစေဆိုပြီးဘုရားစင်ရှေ့မှာ စိပ်ပုတီးတစ်ဖက်ကိုင်ရင်း ဆုတောင်းတယ်။ စာသင်ခန်းထဲက ကလေးငယ်တစ်ယောက်ကတော့အဖေ၊တိုက်ပွဲတွေကြားမှာ ဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ခပ်တိုးတိုးရွတ်ရင်း စာအုပ်ပေါ်ကို မျက်ရည်ကျတယ်။ ရန်သူ့နယ်မြေထဲက ရွာသူရွာသားတွေကတော့ဒီတစ်နှစ်လဲ စိုက်ခင်းတွေပစ်ထားခဲ့ရပြန်ပြီဆိုပြီးအထုပ်အပိုးတွေ […]
ကားပေါ်ရောက်ရင်အိပ်တတ်တာကြောင့်အသက် ၅၀ ဝင်းကျင်ခန့်အဒေါ်ကြီးတစ်ယောက်
ရန်ကုန်-ပြည်- မန္တလေး Express ကားပေါ်တွင်ဖြစ်သည် ကားပေါ်ရောက်ရင်အိပ်တတ်တာကြောင့်အသက် ၅၀ ဝင်းကျင်ခန့်အဒေါ်ကြီးတယောက်မှ ယဉ်မောင်းအားကားစတင်ထွက်ချိန်တွင် အော်ပြောလေသည် ” ကားဆရာရေ အုတ်ဖိုတာဆုံရောက်ရင်အဒေါ့်ကိုပြောပါကွယ်” ” ဟုတ်ကဲ့ ဂျီးဒေါ်ရေ” ထိုသို့ဖြင့် ကားစီးလာရင်း အဒေါ်ကြီးမှာအိပ်ငိုက်ပါလာတော့သည် နာရီအနဲငယ်အကြာတွင်တော့အဒေါ်ကြီးအသံဟိန်းထွက်လာသည် ” ကားဆရာရေ အုတ်ဖိုတာဆုံရောက်ပြီလားကွဲ့ ယဉ်မောင်းရော စပါယ်ယာပါအခက်တွေ့ကုန်ကြလေသည် အုတ်ဖိုတာဆုံကိုအတော်လေးကျော်လွန်သွားတာကိုး […]
[ က ] နှင့်ပက်သက်သော အိပ်မက်များ ၁။ ကြာမျိုးငါးပါးအနံ့ကို ရှုရသည်ဟု မြင်မက်မူ တည်ကြည့်စွာ ဂုဏ်သတင်းကျော်စောရအံ့။ ၂။ ကြာညိုပန်းကို ပန်ရသည်ဟု မြင်မက်မူု မယားကောင်းရအံ့ ၃။ ကြာသွတ်အိုးနှင့် ရေချိုးရသည်ဟု မြင်မက်မူ သူတစ်ပါးတို့၏မှီခိုရာ ဖြစ်အံ့။ ကြာသွတ်အိုးမြင်မက်မူ စည်းစိမ်များအံ့။ ၄။ […]
ဘာလို့ဆင်းရဲတာလဲ ကောင်းလွန်းလို့ ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်
ဘာလို့ဆင်းရဲတာလဲ ကောင်းလွန်းလို့ ဖတ်ကြည့်စေချင်တယ် ဆင်းရဲသားတစ်ယောက်က ဘုရားရှင်ကိုမေးတာ” ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်မျိုးဟာ မွဲတေဆင်းရဲနေရတာလည်း”ဘုရား ဘုရားရှင်က ပြောပါတယ်။ သင်ဟာ” ပေးကမ်းခြင်းနဲ့ ပေးကမ်းနည်းကို မသိလို့ပါပဲ ဆင်းရဲသားက ပြန်ပြောတာ ကျွန်တော်မျိုး” မှာ…..ပေးကမ်းစရာ ဘာမှမှ မရှိတာ…..ဆိုတော့” မြတ်စွာဘုရားရှင်က သင်ပေးတာ” သင့်မှာ ရှိနေတာတွေ မနည်းပါဘူး မျက်နှာ- […]
အမျိုးသမီးတွေ အမှတ်တမဲ့လုပ်မိနေတဲ့ အန္တရာယ် ရှိတဲ့အရာများ မိန်းကလေးတိုင်းဖတ်ရန်
အမျိုးသမီးတွေ အမှတ်တမဲ့လုပ်မိနေတဲ့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့အရာများ (1) မိန်းမကိုယ်ကို ဆပ်ပြာဖြင့် ဆေးကြောခြင်း လုံးဝ ဆပ်ပြာကို မသုံးသင့်ပါဘူး ။ ရေသီးသန့်နဲ့ ဆေးရင် လုံလောက်ပါပီ ။ ဆပ်ပြာမှာ ပါဝင်တဲ့ ဓါတ်တွေက ပြင်းတာကြောင့် မိန်းမကိုယ် ကျန်းမာရေးအတွက် မလိုလား အပ်တာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် […]
နတ်ရေးတဲ့ဖူးစာ အလား “ပဲပြုတ်​ နံပြား” ရောင်းတဲ့ အဖိုးနဲ့အဖွား : ခုခေတ် လူငယ်စုံတွဲတွေ ဖတ်ကြည့်
မနက်​ဆို မိန်းမ ပဲပြုတ်​သည်​ အသံ​တွေကြားမှာ “ပဲပြုတ်​ နံပြား” ဆိုတဲ့ ​အဘ အသံကြားပြီဆို..​ ပြေး ​ပြေးဝယ်​ရတာ အ​မော…. အရင်​က​တော့ အဖွားက ​အော်​​ပေးတာပါ.. အခု​နောက်​ပိုင်း အဘ ကိုယ်​တိုင်​ ​အော်​​’နေပြီ​လေ သူတို့လင်​မယားကို သ​ဘောကျတယ်​​… မလှိုင်​နားရွာတစ်​ရွာက ဇာတိတဲ့… သား​ထောက်​သမီးခံ မရှိ… […]
လွန်ခဲ့တဲ့ လက တစ်လလုံး အဲ့ပုံတွေပဲ facebook မှာတွေ့ နေရ တာ သတိမထားခဲ့ဘူး
ကြက်တူရွေး ရေသောက်ပီဆိုရင် တစ်ပြည်လုံးရေကြီးတယ်တဲ့ ဩော် …အတိတ်​တဘောင် ဩဘာထွန်းတဲ့ ဇဗ္ဗူဒီပါ လက်ျာတောင်ကျွန်းတဲ့…. (ဗန်းမော်ရွှေကူနားကဒုတိယမြစ်ကျင်းမှာ ကြက်တူရွေး ရေသောက်ပီဆိုရင် တစ်ပြည်လုံးရေကြီးတယ်တဲ့ …ကြက်တူရွေးရေငုတ်နေပြီ အထူးသတိရှိကြပါတော့ …) ကြက်တူရွေး ရေသောက်ပီဆိုရင် တစ်ပြည်လုံးရေကြီးတယ်တဲ့ 1 လွန်ခဲ့တဲ့ လက တစ်လလုံး အဲ့ပုံတွေပဲ facebook […]